China Ezi mma Tattoo Pen Kit Na-enweghị Aluminom Ileba TZ-008 Nlụpụta na Factory | MOLON
1) Tatoo Pen Machine 1pcs
2) Power Tụkwasịnụ 1pcs
3) Switkwụ Gbanye 1pcs
4) LBB Cartridges Needles 40pcs (10pcs For Nke ọ bụla) 3rl, 5rl, 5m1,7m1
Chịkọta égbè ahụ
1. Sachaa aka gị. E kwesịrị iji nlezianya mesoo egbe igbu egbugbu. Kpachara anya tupu ị na-ejikwa igwe ndị a. Jiri ncha antibacterial saa aka gị ma ọ bụ yi uwe aka latex.
2. Mara onwe gi na egbe. Eku na-ejikọ mpekere niile ọnụ. Mgbe ahụ ị nwere igwe eletrik abụọ nke na-enye ike maka igwe. Ngwurugwu na-eme ngwa ngwa na ogwe aka agha, nke jikọtara na agịga mgbochi. Onyinye ike na-ejikọ eriri igwe. Enwere ike iwepu ma ọ bụ dochie ihe ndị a niile ka ọ dị mkpa.
3. Chikọtanu gbọmgbọm. Nyochaa njide nke egbe. E nwere akụkụ abụọ nke njide maka ọkpọkọ na egbe egbe. Nịm ndị a ka mma ogologo, na ikesiike abụọ kposara na adịgide. Ná nkezi, agịga ekwesịghị ị gafe n'ọnụ karịa 2 mm na ihe na-erughị 1 mm. Ọ bụrụ na ọbara bara ụba, mgbe ahụ agịga gị toro oke ogologo.
4. Tọọ agịga ahụ. Lelee agịga ndị ị nwetara na kit. Ikwesiri inwe otutu onu ogugu di iche iche. Wụnye otu n'ime ogwu ahụ site na ịtinye ya site na ọkpọka n'akụkụ ọnụ. Kpachara anya ka ị ghara ịgwagbu agịga mgbe ị na-ezukọ.
5. Chebe onu ara ya. Onu ara, nke a makwaara dị ka grommet, na-echedo agịga ma na-agbanye mgbọ egbe. Tinye ọnụ ara na ogwe aka. Mee ngwa ngwa nke agịga ahụ n'elu ọnụ ara.
6. Gbanwee agịga ahụ. Ozugbo ị gbakọtara njigide ahụ, ịkwesịrị ịhazigharị ogologo oge nke agịga ahụ gosipụtara. Nwere ike ịhazigharị mkpịsị agịga ahụ site na ịkpụzi tub ahụ. The tube vise bụ kemeghi kemeghi n'etiti armature na agịga.
Nke gara aga: Black silicone mkpa eri mkpofu egbugbu adịgide na uzo uzo
Osote: Clear 108mm Sterilized Tips With Grip Stop Transparent Long Disposable Tattoo Tips For Tattoo Mkpa.
Mbido Tattoo Kit
Eriri igwe Tattoo Machine Kit
Disposable ntị ịkpọpu Kit
Ngwongwo Ngwongwo Pen Pen
Na-adịgide adịgide attdị Machine Pen Kit
Pierkpọpu Ngwaọrụ Kit
Ọkachamara Gundị Ngwá Ọrụ Ndị ọkachamara
Akpa Ahịa Mgbu
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
Akpa Ngwa Ngwa Ngwa
Egbe Tattoo Egbe
Tatoo Machine Pen Kit
Tattoo Machine Ọkachamara Kit
Ikuku Tattoo Machine Kit
Shell Tattoo Rotary igwe
Ise kpakpando kpakpando 360 gburugburu Tattoo Pedal